ဟေ့အဲဒီမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်အန္းညမ်း။ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်သောတစ်ဦးတည်းအမည်သည်အလုံအလောက်ပြောပြရန်သင်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အားလုံးဟာက၊ဒါပေမယ့်သင်ပေးခဲ့ပြီးပြီအောက်မှာအသက်ရှင်အတွက်အသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုအသက်တာနှင့်မည်သို့မသိကြပါလည်အခြေခံပညာအဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား၊သငျသညျအကြှနျုပျကိုပြောပြပါရစေအဆိုပါခြုံငုံအဓိကအခန္း။ ဖွေ၊လောကီညစ်ညမ်းဂိမ်းများများပြီးအစားဆင်းရဲ:ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အရပ်တို့ကိုနှောင့်အယှက်အယူအ punt နှင့်အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်တစ်ဦးလူသတ်သမား XXX စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်။ မဘုတ္မ်ားအသုံးပြုသူများခံစားနေရဤပြဿနာကို၊သို့သော်ထိုသို့ပင်ပိုအသံထွက်မှကြွလာသောအခါ၊မိုဘိုင်းဂိမ်းကစား။, ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ပေးအလွန်တင်းကျပ်တိ:ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်၊၇ ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ကိုသေချာစေရန်၊သငျသညျမှဝင်ရောက်ခွင့်ရအျညမ်းဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။ တဦးတည်းအရာတစုံတခုကျနော်တို့အမှန်တကယ်သင့်မှတ်ချက်အစောပိုင်းအပေါ်ဒီမှာနေစဉ်ကျနော်တို့အမှတ်တံဆိပ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဘို့အအန္းဖုန်းများ၊အခွင့်အလမ်းကြောင်းမည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာနိုင်ပါလိမ့်မည်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်–ကျနော်တို့အနေနဲ့အာမခံမပေးနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊အတိအကျ? ကောင်းစွာ၊ကြောင်းပြောရအောင်ဘယ်လိုအန္းညမ်းဂိမ်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအထက်ရွေးချယ်မှုများမှာအတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ္းျဖစ္ပါသည္။
အထူးဆော့စ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောအခြားပလက်ဖောင်းများထွက်ရှိပါသည်သောရိုးရှင်းသောတကယ်တော့အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဖို့တတ်နိုင်ရောက်ကြည့်ရှုကနေတဆင့်။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်က Chrome၊ေပ၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အော်ပြေးပါလိမ့်မယ်၊နှင့်သင်ကောင်းဖြစ်သွားပြီရးမွတ္၏။ အန္းထုတ်ကုန်နှင့်၎င်းတို့၏ဘြတ္များမှာပုံမှန်အားဖြင့်တူညီအားအခြားစက်ဆိုလိုတာက၊သငျသညျရှိသည်ဖို့အပ်သောအဘယ်သူမျှမကိစ္စများတွင်အိုင်များနှင့်အခြားသူဘာပဲသင်အသုံးချစေခြင်းငှါ။, နေစဉ်ကျွန်တော်အာမမခံပါဟုတ်-အန္းဂိမ်းကစားဖြစ်လိမ့်မည်၊ကျနော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသေချာစေရန်လိုက်ဖက်အောင်ရှည်ကတို့တွင်အကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြုမှ။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤမူဝါဒနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကို-အခြေခံဂိမ္း၊ဆိုလိုတာကကျွန်မတို့ဟာလွန်မဖြစ်နိုင်ဆာ။ အဆိုပါပြဿနာကိုများအတူဖြစ်သောသူတို့အဖို့လွယ်ကူပြီးပိတ်လိုက်သည်၊အပေါင်းအများကြီးဂေမဟုတ်လည်းဝမ်းသာပီတိရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ညမ်းဆက်စပ်သုံးစွဲခွင့်။ သဘာဝ၊ေဖ့ဘြတ္ပေါ်ဖုန်းများမရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားနှင့်ရလဒ်အဖြစ်၊ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအန္းညမ်းမည်အမြဲဒီနေရာမှာသင်တို့အဘို့အပျော်ရွှင်စွာခံစားကြည့်ပါ!, ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စနစ်နှင့်အတွေးအလုပ်တွေအများကြီးခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကို၊ဒါပေမယ့်ထူးဆန်း၊ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အခြားသူများကဆုံးဖြတ်သွားရန်ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်းများအတွက်မိုဘိုင်းညစ်ညမ်း!
သင်အဘယ်သို့ထင်လို့ပြောရင်သင်ခံစားနိုင်အန္းညမ်းဂိမ်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့? ကောင်းစွာဆုံးဖြတ်၊အလျင်အမြန်ကြောင့်အတိအကျအဘယ်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်! မြင်၊ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာပေါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး၊သင်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ပီအားဖြင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာထိုသူတို့ပျော်မွေ့ရန်:အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်တာမပွင့်တရားစွဲဆိုရွတွက်ဂိမ်းကစားလက်လှမ်းမီသင်သာပေးဆောင်ကြလျှင်သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်နိုင်ပါတယ်အပြည့်အဝပြီးစီးဘဲချောင်းဆိုးငြမူကား၊ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သင်လိုချင်အထောက်အကူအနည်းငယ်၊အခမဲ့ခံစားရအဲဒီလိုလုပ်ဖို့!, အဲရဲ့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏများ၏မှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ထင်သင်ကလုပ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးအကြီးအကျယ်ထောက်ခံသော်လည်း၊မခံစားဖိမည်သည့်လမ်းအတွက်၊ပုံသဏ္ဍာန်သို့မဟုတ်ပုံစံအလက်ကျော်၏ခဲယဉ်းရရှိခဲ့သည်-ငွေသား။ အချိန်ပြောပြလိမ့်မယ်ဖြစ်စေမဒီ gambit ချွတ်ပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကောင်းမြင်ကွာပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္းလိင်ဂိမ်းများသိလို့ဘယ်လောက်ကောင်းသူတို့! သို့သော်လည်းအခြားလမ်းကြောင်းအန္းညမ်းကစားပြိုင်ပွဲဝင်ပြသရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုဤဒိုမိန်း။ သင်ရရှိပါသည်ငါသည်အတွင်းရှိရရန်ချက်ချင်း၊လျှင်မနှေးနဲ့အမြန်၊အဘယ်အရာကိုမြင်မှအားလုံး၏အပျော့သွားတာကိုအကြောင်းသည်အ!
အခုတွဲအားလုံး၏ကြယ်ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ကျွန်မတို့ဟာပြတိုက်တစ်စိတ်ကူးခင်းကျင်းလိင်ဗီဒီယိုသင်ပျော်မွေ့ရန်အဘို့။ အဲဒီကနေလာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့တတိယ-ပါတီ၊အပါအဝင်အကြိုက်အယာဉ်ရပ်နား၊အဖြစ်မှန်၊အဖွဲ့ Skeet၊လိန်ပြီးတော့။ အခြေခံအားဖြင့်၊သင်ရတဲ့အင်္ဂါရပ်-အရှည်ပို့အတွက် ၁၀၈၀ အရည်အသွေးနိုငျသောစမ်းချောင်းအဖြစ်အများကြီးသို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်အဖြစ်သင်လိုချင်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူ–အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာတိပေး! ဤအမှန်တကယ်အချို့အများဆုံးမှော်မြင်ကွင်းကျွန်မတို့တွေ့မြင်ပြီးကြပါပြီနှင့်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ၊၇ အသစ်တင်ထားသည်များထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်!, အဆိုပါဒေတာဘေ့စအထိုင်ကောင်းပြီကိုယ့်မှာ ၁၊၅၀၀ ဗီဒီယိုများ၊ဒါပေမယ့်ချည်နှောင်ပေါက်ကွဲဖို့အကျော်ကိုလာမယ့်နှစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်တက် piling အားလုံး၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းလိင်ဗီဒီယိုများ။ ပလက်ဖောင်းကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပါတယ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအတွက်ဦးစားပေးမိုဘိုင်းဖုန်းများလည်း၊ဒါကြောင့်မတူခံစားရလိမ့်မည်နာကျင်မှုအမြည်းအတွက်သွားလာရန်:ကျနော်တို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပေးသုံးစွဲဖို့ဘာလိုချင်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ။ ဤသည်၏ဒဿန၏အအန္းညမ်းဂိမ်းများနှင့်အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်!
နေသော်လည်းသားရှိခြင်း ၄၄ ဂိမ်းများအတွက်စုဆောင်းခြင်း၊အန္းညမ်းသွားထုတ်ဝေဖို့နောက်ထပ် ၈ ကိုေနာက္ ၁၂ လတည်း။ ကျွန်မတို့ဟာတစ်ဦးရည်မှန်းချက်စည်းနှင့်ချစ်တက်ရောစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဇယားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်ကောက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာ။ ကိုဇောက်ထိုးမှာသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအပေါ်ခွဲတန်းတူဖြန့်ချိပြီးတကယ်ကို့အတွက်အမှတ်တံဆိပ်များလိင်ဂိမ်းပျော်မွေ့။ ကျနော်တို့ရရှိပါသည်ချိန်းတွေ့ simulators၊RPGs၊တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့စတိုင်ထုတ်ကိုက်ညီလိမ့်မည်ဟုသင့်အရသာရန်။, ဆိုရင်ကြောက်မတွေ့ရှိတစ်ခုခုနဲ့တူ–ဖြစ်ပါဘူး! ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူဒါဇင်ဝက်အနုပညာရှင်တွေ၊အဓိပ္ပာယ်အရသဗေဒစတိုင်၏အနုပညာလက်ရာမှာအပြောင်းအလဲမှထုတ်လုပ်မှုမှထုတ်လုပ်။ အချို့အနုပညာရှင်တွေလိုနောက်ပိုင်းကာတွန်းအနီး၊သူမ်ားေတြပိုတြန္းအတွက်အာရုံစိုက်–ဒါကြောင့်သင်တို့ဆီသို့တက်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်တစ်ခုမှာသင်ကဲ့သို့အဘယ်မှာမယ့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့!
ဒါကြောင့်၊သင်ပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဤသို့ဝေး–သင်မည်သို့တွေအကြောင်းလာအပေါ်တွင်အဘယ်အရာကိုမြင်အန္းညမ်းဂိမ်းများလုံးအကြောင်းကိုအမှန်? သိကအာရုံစေသည်! အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည်ယနေ့နှင့်ကြကုန်အံ့ရဲ့ဒီကားလမ်းပေါ်တွင်ပြသ။